Gebze Halkalı Marmaray Hattı Törenle Hizmete Açıldı – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulGebze Halkalı Marmaray Line Adeegga Furan
12 / 03 / 2019 34 Istanbul, Tareenka Tareenka, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
gebze ring marmaray ayaa loo furay adeegga
Madaxweyne Erdogan, GebzeHalkalı xarumaha tareenada laga furo munaasabadda furitaanka ee lagu qabtay Cartal Square. Erdogan, oo ah Erdogan, khadka tareenka ayaa lagu qiyaasay qiyaastii 1 bilyan doolar, ayuu yiri.
Tartanka ugu wayn ee tareenka ugu badan ee ka midka ah macaamiisha ee Istanbul ayaa qaadan doona kunka 75 kun qof oo hal dhinac ah iyo 1 million 700 kun rakaab ah maalin kasta. Khadka xaafaddan ayaa qaadi doona rakaab kuwaas oo sida caadiga ah la geyn karo kaliya gaadiidka kunka ee 100. Khadkan, oo ka kooban saldhigyada Marmaray iyo 43, ayaa u horseedi doona in lagu nasto gaadiidka Istanbul iyada oo la isdhexgalayo khadadka kale. Waxaanu ku faraxsanahay xaqiiqda ah in 440 laga soo saaray dalka.
Marmaray waa qeybta ugu muhiimsan ee mashruucan. Laga soo bilaabo halkan waxaad ku heli doontaa Yurub Yurub dhexdeeda. Horaantii khadadka tareenku waxay aadaan Haydarpaşa iyo Sirkeci dhinaca Yurub. Waxaan isku darnay labadan xariiq. Mid kale waa Yavuz Sultan Selim Bridge. Qeybta hore ee magaalada hoose waxay ka fogtahay baahida Istanbul.
Waxay ahayd shaqo adag oo ka soo horjeedda Istanbul oo u gudubtay dhinaca kale. Ilaa hadda 1,4 bilyan euros, oo ku saabsan miisaaniyada 8,5 ee lagu bixiyo Gebze Halkalı Waxaan jeclaan lahaa in aan u hambalyeeyo qof kasta oo u adeegay inuu soo galo khadka Marmara magaalada. Qeybtan, waxaanu kordhinay dhererka xadiidka 170 ee tareenka Istanbul ee xNUMX.
Erdogan, oo ah qaab kale oo ka mid ah xariiqdan London ilaa Beijing ilaa Istanbul, Iron Iron Road Road ayaa ka dhigeysa marxaladda. Wuxuu tagaa Beijing ka London. Iyadoo laynkaan, YHTs ma isticmaali doonaan Pendik sida joogsiga ugu dambeeya, Halkalısii socon doonaa ilaa. Inkasta oo Marmaray uu ahaa riyo ilaa tan 1860, cidina ma qaadin tallaabooyin la taaban karo. Ka dib markii muddo dheer loo diyaariyay, waxaanu ku talagalnay in aanu dhameeyno Marmaray oo aanu aasaasnay ​​xaruntii 2004 ee 2009. Iyadoo loo eegayo waxyaabihii taariikhiga ah ee dhismaha intii lagu jiray dhismaha, waxay kordhiyeen 2013. Waxa uu sheegay in aanu Marmaray u qaadnay heer aad u sarreeya maanta.
İZBAN's 41inci Station Belevi waa Diyaar Garow Adeeg
Caqabadaha Dabaylaha daran ee Rakaabka Carbiska ee Boosaaso